सहकारी | Ratopati
तरलता संकटको हुण्डरी : सहकारी पनि खतरामा ! access_timeपुस ५, २०७८
तरलता संकटले सहकारी क्षेत्रलाई पनि छ्याप्पै छोपेको छ । लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हात उठाउनुपर्ने स्थिति निम्तिएको छ । सहकारी क्षेत्र पनि यसको मारमा परेको हो । यतिखेर सहकारी क्षेत्र तरलता व्यवस्थापनबारे अन्योलमा छ । झण्डै ३० हजार सहकार...
वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाउँदा सङ्कटमा सहकारी access_timeकात्तिक ७, २०७८
तरलता अभावको नाममा पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूले धमाधम आफूखुसी ब्याजदर तोक्न थालेपछि यसको सङ्कट सहकारीमा क्षेत्र पर्न थालेको छ । सहकारीभन्दा अझ माथि उठेर वाणिज्य बैंकहरूले नै निक्षेप तथा कर्जामा उच्च ब्याजदर अफर गर्न थालेपछि यसको सीधा मारमा सहकारी संस्थाहरू परेका छन् ।...
शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन लुकाउँदै सहकारी access_timeभदौ १६, २०७८
सहकारी संस्थाहरूले शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन लुकाएको पाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा सहकारी संस्थाहरू उच्च जोखिममा छन् । महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनमा सहकारीहरूले शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन नगरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको प...
सहकारीमा नयाँ नियम, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीले राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने access_timeपुस २३, २०७७
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले गोएएमएल सफ्टवेयर सिस्टममार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाईमा एसटिआरर टिटिआरको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएको छ । १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारीले अनिवार्य रुपमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था सहकारी विभागले गरेको छ ।&nbs...
झण्डै ५ हजार सहकारी संस्था गायब ! access_timeपुस २३, २०७७
झण्डै ५ हजार सहकारी संस्था गायब भएको एउटा सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । सहकारी विभागले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार देशभर अहिले २९ हजार ८ सय ८६ वटा सहकारी संस्था छन् । केही समय अघिसम्म सहकारी विभागले नै देशभर सहकारीको संख्या ३४ हजार ८ सय ३७ रहेको बता...
सहकारीमा कर्जा सस्तिने, एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने access_timeमंसिर २४, २०७७
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूले कुल कर्जाको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । सहकारी विभागले आगामी १ माघबाट लागू हुने गरी एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । विभागले तोकेको सेवा शुल्कअनुसार प्रारम्भिक संस्थाले ऋणीलाई प्रवा...
कात्तिक १ पछि के होला सहकारीहरुको अवस्था ? access_timeअसोज १३, २०७७
मर्जरमा जान आनाकानी गर्दै आएका सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी ऐन २०७४ मा गरिएको व्यवस्थाले मर्जरमा जान थप दबाब दिएको छ । यही कात्तिक १ गतेदेखि एक व्यक्तिले एउटा सहकारीको मात्र सदस्यता लिनुपर्ने प्रावधानले मर्जरमा जान सहकारी संस्थाहरुलाई दबाब थपेको हो । सहकारी संस्थाहरु...
कात्तिकदेखि दुई वटा सहकारीमा सदस्य बन्न नपाइने access_timeअसोज १३, २०७७
आउँदो कात्तिक १ गतेबाट एउटै प्रकृतिका दुई वटा सहकारीमा सदस्य बन्न नपाइने भएको छ । सहकारी विभागले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कात्तिक १ गतेदेखि दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने भएको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ (क) मा कुनै व्यक्ति एक ...
सन्दर्भ ब्याजदर : सेवा शुल्कबारे किन भएन निर्णय ? access_timeअसोज ७, २०७७
काठमाडौं । ७ महिना ढिला गरेर सोमबार सहकारी विभागले सहकारी संस्थाका लागि नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर लागु गर्यो । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको निर्धारण र सिफारिसका आधारमा नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको विभागले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष साउनमा सार्वजनिक गरिएको स...
विपदमा सहकारीको कौशल : किसानलाई समर्थन मूल्य, बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण access_timeअसोज ७, २०७७
काठमाडौं । धादिङ नलाङकी सविता सिलवाल पशुपालन व्यवसायमा आबवद्ध छिन् । सोही स्थानको साना किसान सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर यो पेशामा लागेकी उनीसँग अहिले १० वटा भैंसी छ । त्यसमध्ये ४ वटाले दुध दिन्छ । अहिले दैनिक ३५ लिटरजति दुध उत्पादन हुने गरेको सिलवाल सुनाउँछिन् । ...
सहकारीमा एकाएक तरलता ‘अभाव’ access_timeअसोज १, २०७७
करिब एक महिना अघि सहकारी संस्थाहरुमा अधिक तरलता(अधिक लगानी योग्य रकम ) भयो भन्ने आधिकारीक व्यक्तिहरुले नै अहिले धेरैजसो सहकारीमा तरलता अभाव भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रममा दिइरहेका छन् । सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीबा...
सहकारीको साधारणसभाको अन्यौलताबारे विभागले भन्यो– कसरी र कहिलेसम्म गर्ने चाँडै टुङ्गो लगाउछौँ access_timeभदौ २२, २०७७
काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीका कारण सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो वार्षिक साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । हरेक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि कोरोनाका कारण अन्यौलमा परेको छ । सहकारी विभागले सहकारी संघ-संस्थाहरुको वार्षिक साधारण...
लकडाउन र निषेधाज्ञामा सहकारी, घरमै पुगेर दिन्छन् नगद access_timeभदौ १९, २०७७
कोभिड–१९ का कारण सङ्क्रमणबाट बच्न निषेधाज्ञा जारी छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सीमित शाखा खोलेर सीमित कर्मचारीबाट सेवा दिइरहेका छन् । अहिले बैङ्कमा वचत गर्नेहरु बैङ्कसम्म बचत फिर्ता लिन पुग्नुपर्ने अवस्था त त्यो नभए पनि एटीएमसम्म नगद लिन जानुपर्ने अवस्था छ । तर ...
सहकारीलाई ऋण भूक्तानीको म्याद ६ महिना थप्न विभागको निर्देशन access_timeसाउन ९, २०७७
काठमाडौं । सहकारीको ऋण लगानीमा सदस्यहरुलाई ऋण भूक्तानीको म्याद ६ महिना थप गर्न सबै सहकारीहरुलाई सहकारी विभागले निर्देशन गरेको छ । शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै विभागले कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका ऋणीहरुको किस्ता तोकिएको समयभन्दा ६ महिना बढि थपिदिन भनेक...
के सहकारी फोर्स मर्जरको आवश्यकता परेकै हो ? access_timeअसार २४, २०७७
काठमाडौँ । अहिले मुलुकमा लगभग ३५ हजार जति सहकारी छन् । तीमध्ये १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् भने बाँकी २०–२१ हजार अन्य विषयगत सहकारी छन् । सङ्ख्यात्मक रूपमा रहेका करिब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी भए पनि बाँकी रहेका अन्य विषयगत सहकारीहरुले समेत यतिखेर बचत तथ...
सहकारीको पैसा चलायमान क्षेत्रमा खर्च गर्न आग्रह access_timeअसार २०, २०७७
काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन सहकारीको पैसा चलायमान क्षेत्रमा खर्च गर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारी संस्थाहरुलाई आग्रह गरेकी छिन् । ९८ औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस, २६ औं संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस...
विपदमा सहकारीको भूमिका : सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कि दोहन ? access_timeअसार १०, २०७७
काठमाडौँ । कोभिड–१९ का कारण यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त छ । उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यासाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने रोजगार, व्यापार व्यवसाय, आयात निर्यात सहज हुन सकेको छैन । वस्तु तथा सेवाको राम्रो उत्पादन र बजारीकरण हुन नसक्दा अर्थबजार सम...
सहकारीमा वित्तीय तरलता व्यवस्थापनको चुनौती access_timeजेठ १३, २०७७
काठमाडौँ । संविधानतः मुलुकको तीन खम्बे अर्थनीति मध्येको एक अङ्ग सहकारी क्षेत्र हो । कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ का कारण जति पनि अन्य क्षेत्र प्रभावित छन् त्यसबाट सहकारी पनि अछुतो छैन । कोरोना कहरबाट मुलुकको सहकारी क्षेत्र पनि निकै प्रभावित हुन पुगेको छ । प्रमुखत...
अब सहकारीमा पनि मर्जरको बाटो खुल्यो access_timeफागुन १६, २०७६
काठमाडौं । अब सहकारी संस्थाहरु पनि अब मर्जरमा जान सक्ने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियावारण मन्त्रालयले सहकारी संस्था एकीकरण कार्यविधि तथा सहकारी प्रवद्र्धन कोषसम्बन्धी कार्यविधि अघि बढाएसँगै सहकारीहरुलाई मर्जरको बाटो खुलेको हो । शुक्रबार मन्त्राल...
गोदावरीका २७ सहकारी झोलामा access_timeफागुन ६, २०७६
ललितपुर । गोदावरी नगरपालिकाभित्र सञ्चालन भएका एक सय २८ सहकारीमध्ये २७ सहकारी हाल झोलामा रहेका छन् । त्यस्ता सहकारीले महिनाको एकपटक कार्यालय खोल्ने तथा साधारणसभा गरे पनि जानकारी नदिने र सम्पर्कमा नरहने गरेका छन् । नगरपालिकाभित्र सञ्चालित एक सय २८ मध्ये एउटा सहक...